Kuzosivula amehlo ukudlala ne-Melika | News24
Kuzosivula amehlo ukudlala ne-Melika
ININGI lamazwe eliya kuma-Olympics azobe eseRio kulonyaka abonakala ekhetha noma ecubungula kabanzi amazwe abadlala nawo emidlalweni yesihle.
Kusobala ukuthi lamazwe aya ku 2016 Rio Olympics akubona kubaluleke kakhulu ukudlala imidlalo yesihle, kodwa hhayi nanoma ubani.
Iningi lalamazwe ashalazela amazwana athathwa njengemiswahla ebholeni lomhlaba ukuze bahlale besemgangathweni futhi becijile. Yingakho-ke kulezinsuku noma kulezinyanga ezedlule iqembu lakuleli labesifazane iBanyana Banyana lizobe libhekene nezwe laseMelika (USA) emdlalweni wesihle.
Iningi labantu baseMzansi nabake basebenza noma badlalela iBanyana Banyana bathi iUSA ingamanye amazwe ahlonishwayo ebholeni labesifazane ngoba kade baliqala.
Phela iqembu labesifazane laseMzansi, iBanyana Banyana izotholana phezulu neUSA ngoMqgibelo wangomhlaka 9 July eSoldier Field eChicago (USA).
Owayeyisibabuli seBanyana uPortia Modise uthe abaqeqeshi baleliqembu kanye nenhlangano yebhola kuleli iSafa bashaye into ecokeme ngempela ngokuqoka iUSA ngoba ingelinye lamazwe athulelwa isigqoko abantu abaningi emhlabeni wonke.
“IBanyana Banyana izofunda okuningi ngokudlala neUSA. Phela amaMelikana izikhokho ezindala ebholeni labesifazane, futhi-ke kade baliqala.Ngokwazi kwami bayazifela ngalo futhi bahlelekile ngalo,”kusho uModise.
Lensephe endala iyavuma futhi ukuthi iUSA inolwazi olunzulu ebholeni labesifazane ngoba kade baliqala.
“IUSA inomlando omude ebholeni labesifazane, abaqalanga ukudlala izolo.”
Nowake waqeqesha iBanyana Banyana isikhathi eside nenkalakatha endala ebholeni labesifazane uFran Hilton-Smith uthi uMzansi wenze kahle wacela umdlalo wesihle nezikhokho zase-USA. “Kube kuhle impela futhi ngiyavuma ukuthi iSafa kanye nabaqeqeshi beBanyana Banyana bashaye khona ngempela ngokucela iUSA ukuba bake bethi ukuvikisana nayo. Phela ibhola labesifazane liyahlonishwa futhi likhulu eUSA. Umdlalo wethu nabo uzoba nzima kakhulu kodwa okumnandi ukuthi kuningi esizokufunda kubona,”kusho uHilton-Smith.
Kanti omunye wezilomo zaleliqembu nodlala esiswini Nompumelelo Nyandeni uthe balindele ukuthi bafunde okuningi kwiUSA kanti futhi namathiphu bazowananela.
“Phela uma udlala namazwe afana neUSA kufanele ucoshacoshe okungakusiza kusasa,”kusho uNyandeni.
Ngokwesikhathi saseUSA lomdlalo uzoba ngo 12 emini kodwa eMzansi kuzobe kuwu 7 ntambama. Phela kuzokhumbuleka ukuthi iUSA isemuva ngamahora ayisikhombisa esikhathini sethu la eMzansi. Iqembu lase-USA njengamanje liqhoqhobele phezulu ohlweni lomhlaba ebholeni labesifazane.
“Noma umdlalo wethu uzoba nzima neUSA kodwa lokhu kuzosifundisa okuningi nesingakulindela eRio uma sekudlalwa amaOlympics,”kusho uNyandeni.